Kandida amin’ny fifidianana Biraon’ny Filankevi-Pitantanana GV 2020, misolo tena ny nanao fifanarahana arak’asa: Mong Palatino · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Avrily 2020 6:31 GMT
Mong Palatino moa dia avy ao Manila, Philippines. Efa hatrany amin'izy nianatra tany amin'ny kolejy i Mong no mpikatroka ary efa nisy fotoana naha-filohan'ny Sendika Nasionalin'ny Mpianatra ao Filipina azy, talohan'ny nidirany ho solontenan'ny antoko Kabataan (Tanora) indroa miantoana tao amin'ny Lapan'ny Antenimieran'i Filipina. Tonian'ny GV Azia Atsimo Atsinanana i Mong ary efa hatramin'ny jona 2006 izy no tato amin'ny Global Voices.
Nangatahana hamaly ireto andiam-panontaniana manaraka eto ambany ireto ireo kandidà rehetra amin'ny fifidianana 2020. Aza misalasala manontany zavatra hafa amin'i Moon ao amin'ny fanehoan-kevitra ambanin'ny lahatsoratra teny anglisy!
Inona no tena nanosika anao hiditra amin'ny biraon'ny filankevitra GV?
Efa nanatontosa anjara asa maro tato amin'ny fikambanantsika aho ka nanomboka tamin'ny mpanoratra volantera tamin'ny taona 2006, tonia tamin'ny taona 2008, mpikambana tao amin'ny komity fandraisana ny vovonan'i Cebu tamin'ny taona 2015 ary mpiara-miasa tamin'ireo tetikasa maro mifandraika amin'ny GV ka izany no mahatonga ny aingam-panahy hanompo ao amin'ny filankevipitantanana fa hirika tsy manampaharoa izao hizarana ny fomba fijerin'ny menavazana hanampiana amin'ny fitarihana amin'ny hoavin'ny vondrom-piarahamonintsika.
Talenta, fahaiza-manao, fifandraisana ary traikefa tahaka ny ahoana no azonao atolotra ny Global Voices amin'ny anjara toeranao ao amin'ny biraon'ny filankevitra GV ?
Ankilan'ny fahazarako amin'ny tantara sy ny fahavitrihan'ny efi-panoratan'ny GV, dia mavitrika aho amin'ny fanaraha-maso ny fandrahonana mahazo ny fahalalaham-pitenenana eto Azia-Pasifika ary niasa niaraka tamin'ny vondrona sy tambajotra isankarazany amin'ny famaliana ireny fanamby ireny.
Rehefa mitodika mankany amin'ny telo taona manaraka ianao, araka ny hevitrao, inona no tokony ho laharam-pahamehan'ny GV amin'ny ankapobeny amin'ny maha fikambanana azy?
Fanamafisana izay mandrafitra ny efi-panoratana amin'ireo tetikasa isankarazany toy ny Advox sy Rising Voices, ary hitondra fahavitrihana bebe kokoa avy amin'ny mpikambana amin'ny vondrom-piarahamonina izany, sy fitadiavana fiaraha-miombona antoka.
Lafiny manao ahoana no tena mahaliana anao indrindra amin'ny asan'ny GV ?
Famokarana tantara satria mampisy fiaraha-miasa amin'ny mpikambana amin'ny vondrom-piarahamonina izany. Mitaratra ny iraky ny GV amin'ny fanamafisana ny feo, fampifandraisana fitodiham-pijery, ary fananganana vondrom-piarahamonin'ny mpanoratra sy mpandikateny.
Inona no zavatra tianao ho azo ato amin'ity biraon'ny filankevitra ity, na eo amin'ny sehatry ny asa na manokana?
Tsy tena matoky tanteraka aho, fa ho entiko kosa ny fizàran-draharahako amin'ny maha-mpikambana ahy tanatin'ny efa ho 14 taona. Ary mikasa aho ny hanompo ao amin'ny filankevitra, raha omena ahy izany hirika mahafinaritra izany, ho fomba hanatsaràna ny asako ao amin'ny efi-panoratana, sy hanome aingam-panahy amin'ny hafa hirotsaka bebe kokoa amin'ny tetikasan'ny GV
Ahoana no fomba handrindranao ny asanao ao amin'ny biraon'ny filankevitra amin'ny andraikitrao manokana na ny asanao hafa?
Ny asa niarahako tamin'ny GV no nampianatra ahy handanjalanja izay laharam-pahamehana, ary nitari-dalana ahy izany amin'ny fomba hanohizana ireo fanandratateny sy tetikasa mitovitovy aminy. Amin'ny fomba maro, ireo firotsahako arakasa sy manokana hafa dia mivady ihany koa amin'izay nanandratan'ny GV teny amin'ny maha-vondrom-baovaom-piarahamonina azy. Ny zavatra iraisana dia ny fitovian'ny tanjona hiarovana ny fahalalaham-pitenenana ary manao izay hiantohana fa mbola misokatra ho an'ny rehetra ny sehatra sivika, indrindra ho an'ireo mpikambana anjorombalan'ny fiarahamonina.
Fomba fiasa tahaka ny ahoana no ampiasainao hirotsahana sy hihainoana ny vondrom-piarahamonina mba hisoloana tena azy ireo amin'ny fomba mahomby eo amin'ny ambaratongam-pitantanana?
Tena ilaina sy mahomby ny zotra natomboky ny Vaomieran'ny Vondrom-piarahamonina, ary mety hotanihana ny lesona avy aminy amin'ny fanatrarana sy fihainoana ny fitodiham-pijerin'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina. Ary rehefa ho solontenan'ny tonia hafa ao amin'ny filankevi-pitantanana aho, dia ho afa-miresaka manokana amin'izy ieo hihaino ny fijeriny amin'ny resaka fandaminam-pikambanana.